I-Treen Cottage, ikotishi elincane eliseduze nolwandle.
Kessingland, England, i-United Kingdom
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Abby
Kutholwe ukuhamba ngezinyawo okuyi-100m ukusuka ogwini, edolobhaneni elingasogwini i-Kessingland, uzothola i-Treen Cottage. Leli khaya elihle labadobi langaphambili lizokukwenza ube sesimweni esihle sokujabulela izinsuku zasebhishi nomndeni noma njengemibhangqwana emibili nenja yakho!
I-Kessingland iyidolobhana elikhulu elisogwini lwaseSuffolk kuphela amamayela ayi-4 ukusuka edolobheni elidumile laseLowestoft kanye nokuhamba imizuzu eyi-15 ukusuka eSouthwold. I-Kessingland iyindawo yokuphumula yomndeni edumile kanye nokubaleka okuhle.
E-Treen cottage, uzoba nendawo yakho yonke ngekhefu lakho leholide. Igumbi lokuhlala lihlotshiswe kahle ngosofa abanethezekile kanye ne-smart TV. Konke kulungele lobo busuku be-movie obupholile nomndeni noma abangani. Ikhishi lisanda kuvuselelwa futhi lifakwe kahle ihhavini likagesi nehobhu, ifriji, ifriji, i-microwave. Kukhona zonke izinto ezibalulekile zasekhishini futhi uzoba nomshini wokuwasha izitsha kanye newasha/umshini wokomisa, ukuze wenze iholidi lakho likhululeke kakhudlwana.
Kukhona ipaki yokudlala yezingane ngaphesheya komgwaqo, elungele imindeni.
Ngasemuva kwesakhiwo esiphansi, uzothola igumbi lokugezela elihle elisanda kulungiswa.
I-Treen Cottage inikeza indawo eyanele yokulala yabantu abangu-5. Phezulu phezulu uzothola amakamelo okulala amathathu ahlotshiswe kahle futhi anethezekile. Siyajabula ukuthi nathi sinezinja eziziphethe kahle.
Igumbi lokuhlala: Izihlalo ezikhululekile ezinosofa nezihlalo ezimbili, i-Smart TV ne-wifi ukuze ubuke zonke izinhlelo zakho ozithandayo ku-Netflix, i-Prime, i-Disney+ noma i-Now TV (uzodinga okubhaliselwe kwakho ukuze ufinyelele lezi).
Igumbi lokudlela elibanzi elinetafula nezihlalo eziyisi-6. Umsakazo we-DAB nemidlalo yokuzijabulisa komndeni. Kukhona nesihlalo esiphezulu sabancane.
Ikhishi: I-electric cooker ne-hob, ifriji/ifriji, iwasha/idryer, umshini wokuwasha izitsha kanye ne-microwave. Zonke ezinye izidingo zasekhishini zikhona kubandakanya ne-BBQ esethelwe izinyanga zasehlobo.
Igumbi Lokugezela Lomndeni: Ibhavu elineshawa ngaphezulu, isikrini sengilazi, ujantshi wethawula elifudumalayo, i-WC, kanye nesitsha.
Njengoba leli kuyindlu yangasese endala, izitebhisi zingumqansa, kodwa kunojantshi kanye nezindawo zokubambelela ezimelene nokushelela ezitebhisini.
Igumbi lokulala 1: Umbhede olingana nenkosi, amatafula nezibani eziseceleni kombhede, ikhabethe lezingubo, indawo yomlilo efakiwe kanye netafula lokugqoka noma ideski uma kudingeka indawo yokusebenza. I-hairdryer ekamelweni.
Umbhede wokuhamba, nomatilasi neshidi. Uzodinga ukuza nezakho zokulala zalokhu. Kukhona nesango lezitebhisi uma kudingeka.
Iwindi linamakhethini angama-blind futhi amnyama.
Igumbi lokulala 2: Imibhede emibili eyodwa, isifuba samadrowa kanye nesibani. I-hairdryer ekamelweni.
Kukhona unogada wombhede uma kudingeka.
Igumbi lokulala 3: Lifinyeleleka nge-Bedroom 2. Umbhede owodwa oneyunithi yokugcina. Sicela uqaphele leli gumbi alinawo umnyango wekamelo kulo.
Iwindi linezimpumputhe kanye ne-black blind.
Ingadi: Indawo encane evalekile yegceke enezihlalo zesitayela se-wicker kanye netafula. Ngaphansi kwendlela kunengadi yangasese, ebiyelwe enetafula lezihlalo eziyisi-6 nezihlalo kanye ne-BBQ. Ingadi iqukethwe ngokuphelele ukuze izingane zidlale kuyo.
Kuneshede elikhiyekayo ngaphandle ongagcina ngalo amabhayisikili, ama-scooters, njll uma kudingeka. Sikunikeza izihlalo ezi-5 zasebhishi ongazisebenzisa ngenkathi uhlala.
Indawo yokupaka: Sicela usebenzise indawo yokupaka izimoto yamahhala ngaphesheya komgwaqo, njengoba indawo yokupaka ingaba ncane ngaphandle kwendlu. Kulula ukudonsa eduze kwekotishi ukuze ulayishe futhi wehlise bese upaka ngaphesheya komgwaqo.
Ukushisisa: Ukushisa okuphakathi kwegesi. Zimbili izicishamlilo ezingasebenzi ngenxa yezizathu zempilo nezokuphepha.
Amanothi: I-WiFi, ilineni lombhede, namathawula kufakiwe.
Izinja eziziphethe kahle zamukelekile, sicela ungasazisa uma ubhukha.
4.92(38 okushiwo abanye)
Ngaphesheya komgwaqo kunepaki lokudlala lezingane elinendawo yokupaka yamahhala. Kukhona negumbi letiye elithandekayo elibizwa nge-'Sweet Retreat Tearoom'. Phezulu komgwaqo uzothola isitolo esincane esiwubukhazikhazi esibizwa ngokuthi 'I-Beach Hut', lapho ungathola khona izinto ezibalulekile njengobisi, itiye, nokudla okulula. Izitolo ezinkulu nezinye izinsiza zikuhambo lwemizuzu emi-5 kuphela.
I-Treen Cottage ayizuzi nje kuphela ngokuba nolwandle indawo ekude netshe, futhi inendawo yokucima ukoma kanye nekhefi uhambo oluyimizuzu engu-1 ukusuka emnyango ongaphambili.
Inikeza ubhishi oluhle kakhulu olungamoshiwe olulungele lezo zinsuku zasehlobo libalele noma lezo zindlela zohambo lwasebusika olubandayo oluya e-Benacre Nature Reserve. Idolobhana linezitolo eziningi zasendaweni, indawo yokudlela ebizwa nge-The Waterfront, okuyigama layo elishoyo, esogwini lolwandle. Kunezindawo zokushicilela ezimbili ezinobungani ezibizwa nge-The Sailor's Home kanye ne-Livingstone's - zombili ezihlinzeka ngesidlo sasemini sangeSonto. Idolobhana futhi lihlinzeka ngepaki yezilwane zasendle i-Africa Alive, intandokazi eqinile yanoma yiliphi iholide lomndeni.
Ngemoto ungavakashela i-Pleasurewood Hills Family Theme Park kanye nentandokazi yethu, i-Bewilderwood.
Kukhona ne-Dunwich Heath okuyisizinda se-National Trust, i-RSPB Minsmere kanye ne-Carlton Marshes Nature Reserve.
Ezinye izinsuku zokuphuma imibono nje uhambo olude, i-Oulton Broad, iSouthwold ne-Aldeburgh.
I-Lowestoft eseduze inamachweba amabili, itheku elisebenzayo eline-marina nendawo yokumisa imikhumbi emikhulu, ulwandle olunesihlabathi esisagolide olunezinto ezihehayo ezihlanganisa i-scuba diving, i-snorkelling, i-kite surfing kanye ne-jet skiing, kanye nesinema.
Indawo ezungezile inengcebo enkulu yezindawo ongavakashela kuzo nokuthile okujabulisa wonke amalungu omndeni eholidini elingasogwini lolwandle. I-Kessingland ibiyindawo enentshisekelo enkulu kubavubukuli njengoba amathuluzi nezinsiza ze-Palaeolithic kanye ne-Neolithic zitholwe lapha kanye nezinsalela zehlathi lasendulo ezigqitshwe phansi olwandle.
UAbby Ungumbungazi ovelele
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$132.
Hlola ezinye izinketho ezise- Kessingland namaphethelo